Echezila Echiche Ụgha Banyere Banyere Ala na Banyere Aha
Ihe omuma nke ulo oba
Banyere akụ na ụba na-abịa site na ihere. Yabụ, ọtụtụ ndị ọchụnta ego na ndị ọchụnta azụmaahịa anaghị nghọta. Fọdụ ndị na-ekwute naanị maka na ha nwere ike ịchekwa ego ha n'ụlọ akụ gaa na mba. Ihe osise nke ụgbọ mmiri ngwa ngwa, oke ọnụ, oke ọgwụ ọgwụ, na isi ọcha na-abata n’otu ntabi anya. Ọzọkwa, ịmụba ihe nkiri Hollywood dị njọ, ihe nkiri televishọn, na foto na-adịghị mma nke ndị nta akụkọ agbanwebeghị echiche a. Ha enweghị ike isi na eziokwu.
Etu ndi mmadu jiri ego si aga mba ofesi
Eziokwu bụ nke a. Centerslọ ọrụ ego na mba dịpụrụ adịpụ (OFC) ma ọ bụ ụlọ akụ, makwaara dị ka ụtụ ụtụ isi, dị adị maka obere ebumnuche. Ha nwere ike inye aka ịnye oke ọnụ ahịa, uto akụ, yana mbelata ụtụ - dabere na ikike gị. Anyị maara ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ iji nyere ndị ụlọ ọrụ na ndị ụlọ ọrụ dị iche iche, ndị ukwu na ndị nta, gburugburu ụwa.
Nwere ebe nchekwa ego na mpaghara azụmahịa nwere ike iweta ezigbo ụwa maka ọtụtụ nsogbu chere ndị mmadụ ihu taa. O nwere ike inyere ndị na-achọ nchebe akụ aka pụọ ​​na ikpe ndị a na-echere. Ọ bụkwa otu ụzọ iji belata ihe ndị gbara ọchịchị gọọmentị na-akwụghị chịm gburugburu.
Iji jide n'aka, ọ kachasị mma ijikọ akaụntụ akụ nke azụ na ntụkwasị obi nchekwa nchekwa. Site na ngwakọta a, ọ nwere ike inye nchedo bara ụba site na ihe ọjọọ. Ihe isi ike dị otú ahụ gụnyere ịgba alụkwaghịm, ọnọdụ ahịa na-adịghị mma, ma ọ bụ ịgba akwụkwọ. Ihe egwu ndị a bụ ihe ndị a na-ahụkarị na Western ụwa.
Akaụntụ Banyere Banyere Akaụntụ: Ịkwụ Ụgwọ Ego, na Mmemme Criminal Ndị Ọzọ
Anoghi n'ulo oba gburugburu uwa nwere otu ebumnuche ha mgbe ha na emepere ndi ala ozo. Nke a bụ, ka ị ghara ịhapụ ndị ọma ma mee ka ndị ọjọọ pụọ. Banklọ akụ nwere ike tufuo akwụkwọ ikike ya ma ọ bụrụ na ọ na-ele ya anya ọzọ mgbe ha na-enyo ọrụ enyo. O nwekwara ike ghara inwe ike izipu ego na US dollar ma ọ bụ Euro, na-ewepụ ya azụmaahịa. Yabụ, nwee obi ike, mgbe ị na-emeghe akaụntụ, ụlọ akụ agaghị ekwe ka ị gbue na inye akwụkwọ njirimara gị. Ha ga acho ihu akwukwo nke ego ha nwetara. Na mgbakwunye, ha ga-achọ ihe akaebe na ego ahụ sitere na isi mmalite iwu. Ọnụ ahịa inweta na idebe akwụkwọ ikike ichekwa ego dị oke mkpa. Ya mere, ụlọ akụ agaghị ekwe ka i jiri ụzọ mkpụmkpụ. A bịa n’inweta ịdị uchu a chọrọ maka ya, ụlọ akụ ga-elele igbe niile tupu imepe akaụntụ gị.
Ọ ga-abụ ịkwụwa aka ọtọ ikwu na ọ nweghị ego n'ụzọ ezighi ezi na-abanye n'ime akaụntụ akụ nke mba ọzọ. Mana dịka anyị ga - ahụ n'oge na - adịghị anya, nke ahụ anaghị ekwu ọtụtụ ihe. N'ikwu eziokwu, ka anyị leba anya n'ụkpụrụ ndị ahụ na-ekwu na onye na-akwụ ụgwọ obere ego ga-eche na ikpe mara ya. Iwu a na-akpọ “nchekwa” nwere ọrụ maka ịkwụ ụgwọ iwu na-akwadoghị karịa nke a na-akpọ “taxtụ ụtụ isi” nwere. Iwu ikike “usoro iwu” wee bụrụ nnukwu ịkwa ego na ụlọ ọrụ ntinye ego nke ndị omekome n'ụwa. Na United States bụ ndị isi n'etiti ha. US na-ebunye ihe dị ka ọkara nke ego niile ebubọrọla n'ime ụwa dị na steeti 50 ya. Nkera nke a tụgharịrị na atụmatụ nchedo nke $ 300 ijeri US.
N'ezie, United States abụghị naanị ikike dị elu, ma ọ bụ ikike dị ukwuu bụ ebe ọrụ a. Mba ndị ọzọ dị ka UK na Germany keere oke dị iche iche. Ndị US bụ ụtụ isi maka ego ha zuru ụwa ọnụ. Yabụ, ị na-ebugharị ego na azụmaahịa na ngwaọrụ nke iwu dị mma ọtụtụ na-enye uru nchekwa nchekwa. Agbanyeghị, ọ naghị adịkarị mma maka mbelata ụtụ. Thatghọta nghọta ụtụisi ahụ bụ ihe ọhụrụ, ụtụ ezumike n'iji akụkụ ndị dịpụrụ adịpụ abụghị ihe amamihe dị na ya ma ọ bụ na ọ dị irè.
Falsegha echiche bụ na ụtụ isi nweta mpaghara / mpụga ụtụ isi bụ mpaghara kacha mma maka ịkwado onye omekome ahụ. Ma ihe mere bu eziokwu bu na ikike ndi mmadu di otutu kwenyere na ego ndi ahu. Havezọ ndị ụtụ isi dị obere na-anọchite anya pasent pere mpe karịa.
N’ezie, ụdị eziokwu ndị a adịkarịke anaghị akọ na ozi akụkọ TV na akụkọ mgbasa ozi. Ozizi ndị a dị ịtụnanya na-eme ihe n'ezoghị ọnụ.
Yabụ, dị ka anyị nwere ike ịhụ, enwere ọtụtụ akụkọ ifo gbasara gburugburu ụlọ akụ. Mgbe anyị tụbara, anyị na-ahụ na a na-ahazi ụlọ akụ dịpụrụ adịpụ nke ukwuu. Kslọ akụ nwere ike hapụ ikikere ha ma ọ bụ tụọ ha ezigbo ụgwọ maka iburu ndị ahịa adịghị mma. Ndị na-ahazi usoro na-enyochakarị ụlọ akụ maka ndekọ ama ama nke onye ahịa gị. Ọ bụrụ na onye na-enyocha ụlọ akụ na-enyo enyo onye ji akaụntụ nke mba ha maka ebumnuche na-enweghị isi, ha agaghị enweta akaụntụ. Ọ bụrụ na ejiri ya n'ụzọ a mgbe emepe akaụntụ ahụ, n'oge na-adịghị anya, a ga-achụpụ ha n'ụlọ akụ.
Banklọ akụ na-edebe akwụkwọ ikike ya dabere na ha na-agbaso usoro obodo na nke ụwa. Ọzọkwa, ha ga-agbasosi ike ụkpụrụ ike ike. Ya mere, ụlọ akụ dị iche iche gburugburu ụwa na-agbasi mbọ ike ịgbaso iwu. Ha na-eme ike ha niile ka ha ghara ime ka ndị ezigbo mmadụ bata na ndị ọjọọ. Ezigbo ego ha na-enweta na ntanetị na-adabere na ya.
<Isi nke 3
Isi nke 5>